मागअनुसार रगतको आपूर्ति हुन सकेको छैन
बुधवार, जेठ ८, २०७६
As of Tue, 21 May, 2019 20:50
ADBL Rs.418 (0%)
AHPC Rs.110 (1.85%)
AKJCL Rs.79 (5.33%)
AKPL Rs.198 (5.32%)
ALBSL Rs.450 (0.22%)
ALICL Rs.432 (0.23%)
AMFI Rs.563 (0.54%)
API Rs.157 (6.08%)
BARUN Rs.96 (-2.04%)
BBC Rs.1662 (1.96%)
BFC Rs.105 (-0.94%)
BOKL Rs.276 (0%)
BPCL Rs.448 (4.67%)
CBBL Rs.942 (0.11%)
CCBL Rs.169 (0.60%)
CEFL Rs.96 (-1.03%)
CFCL Rs.123 (7.89%)
CHCL Rs.538 (2.48%)
CHL Rs.102 (2.00%)
CHLBS Rs.460 (0%)
CIT Rs.2590 (-0.77%)
CLBSL Rs.566 (3.47%)
CMB Rs.140 (0%)
CMF1 Rs.9.72 (-1.82%)
CORBL Rs.134 (9.84%)
CZBIL Rs.230 (0.44%)
DBBL Rs.150 (-0.66%)
DDBL Rs.735 (-0.68%)
DHPL Rs.70 (-1.41%)
EBL Rs.671 (1.36%)
EDBL Rs.319 (3.57%)
EIC Rs.423 (0%)
FMDBL Rs.402 (-0.74%)
FOWAD Rs.1517 (0.46%)
GBBL Rs.228 (-0.44%)
GBIME Rs.309 (-0.32%)
GBLBS Rs.360 (1.69%)
GDBL Rs.217 (-0.46%)
GFCL Rs.126 (3.28%)
GHL Rs.116 (-4.92%)
GILB Rs.1260 (1.53%)
GLICL Rs.562 (1.26%)
GMFIL Rs.126 (1.61%)
GRDBL Rs.111 (0%)
GUFL Rs.115 (3.60%)
HBL Rs.595 (-0.83%)
HDL Rs.1908 (-4.55%)
HGI Rs.381 (0.26%)
HIDCL Rs.166 (5.06%)
HPPL Rs.188 (3.87%)
ICFC Rs.161 (-2.42%)
IGI Rs.422 (0%)
JBBL Rs.148 (-1.33%)
JFL Rs.176 (1.73%)
JSLBB Rs.2107 (-2.45%)
KADBL Rs.174 (-1.69%)
KBBL Rs.226 (-0.88%)
KBL Rs.221 (1.38%)
KKHC Rs.69 (0%)
KNBL Rs.140 (0%)
KPCL Rs.95 (5.56%)
KRBL Rs.108 (-1.82%)
KSBBL Rs.160 (0.63%)
LBBL Rs.206 (0.49%)
LBL Rs.223 (0%)
LEMF Rs.7.98 (-0.87%)
LGIL Rs.505 (0.40%)
LICN Rs.1925 (2.94%)
LLBS Rs.758 (0.40%)
LVF1 Rs.10.21 (-1.83%)
MDB Rs.263 (4.37%)
MEGA Rs.196 (-0.51%)
MERO Rs.598 (-1.64%)
MFIL Rs.122 (3.39%)
MHNL Rs.99 (2.06%)
MLBBL Rs.452 (-4.44%)
MLBL Rs.201 (1.01%)
MNBBL Rs.377 (0.53%)
MNBBLP Rs.204 (0%)
MPFL Rs.199 (9.94%)
MSLB Rs.1115 (-0.71%)
MSMBS Rs.502 (-0.99%)
NABIL Rs.840 (1.20%)
NABILP Rs.810 (0.25%)
NADEP Rs.468 (-0.85%)
NBB Rs.228 (1.33%)
NBL Rs.333 (-1.48%)
NCCB Rs.256 (-0.39%)
NCDB Rs.145 (1.40%)
NEF Rs.8.52 (-0.12%)
NGPL Rs.129 (3.20%)
NHPC Rs.69 (1.47%)
NIB Rs.537 (-0.92%)
NIBLPF Rs.7.57 (-3.69%)
NIBPO Rs.512 (0.39%)
NIBSF1 Rs.9.4 (-1.05%)
NICA Rs.482 (-0.21%)
NICGF Rs.9.61 (-0.52%)
NICL Rs.394 (-1.25%)
NIL Rs.520 (0.97%)
NLBBL Rs.525 (0.96%)
NLG Rs.816 (-0.37%)
NLIC Rs.933 (-0.32%)
NLICL Rs.660 (0.30%)
NMBHF1 Rs.9.8 (0.93%)
NMBMF Rs.991 (-1.88%)
NMBSF1 Rs.10.7 (-0.47%)
NMFBS Rs.1602 (-1.72%)
NNLB Rs.410 (0.24%)
NSEWA Rs.454 (0.22%)
NTC Rs.729 (-0.82%)
NUBL Rs.855 (-1.27%)
OHL Rs.648 (1.57%)
PCBL Rs.363 (-0.82%)
PFL Rs.146 (5.04%)
PIC Rs.1208 (0.75%)
PICL Rs.710 (-0.42%)
PLIC Rs.472 (0%)
PMHPL Rs.113 (2.73%)
PRIN Rs.411 (0.49%)
PROFL Rs.106 (-3.64%)
PRVU Rs.279 (-0.36%)
RADHI Rs.174 (8.75%)
RBCL Rs.10900 (0.28%)
RBCLPO Rs.10051 (0.49%)
RHPC Rs.94 (0%)
RLFL Rs.147 (9.70%)
RMDC Rs.668 (0.45%)
RRHP Rs.94 (1.08%)
RSDC Rs.381 (0%)
SADBL Rs.153 (1.32%)
SAEF Rs.9.8 (2.08%)
SANIMA Rs.359 (-0.28%)
SBBLJ Rs.205 (0.49%)
SBI Rs.480 (0%)
SBL Rs.337 (0%)
SCB Rs.690 (0.15%)
SDESI Rs.602 (-1.31%)
SEF Rs.10.07 (5.33%)
SEOS Rs.10.2 (-1.45%)
SFFIL Rs.223 (1.83%)
SHINE Rs.259 (-0.38%)
SHIVM Rs.585 (-1.68%)
SHL Rs.236 (-0.42%)
SHPC Rs.286 (6.32%)
SIC Rs.1420 (2.68%)
SICL Rs.858 (0.12%)
SIFC Rs.160 (0.63%)
SIL Rs.589 (1.38%)
SINDU Rs.145 (-5.23%)
SKBBL Rs.998 (1.11%)
SLBBL Rs.475 (0.21%)
SLBS Rs.822 (0.12%)
SLBSL Rs.581 (6.22%)
SLICL Rs.591 (0.17%)
SMATA Rs.1318 (0.23%)
SMB Rs.550 (9.13%)
SMFDB Rs.540 (-7.06%)
SPARS Rs.390 (6.85%)
SPDL Rs.97 (4.30%)
SRBL Rs.259 (-0.38%)
SWBBL Rs.899 (-0.77%)
UFL Rs.187 (1.08%)
UIC Rs.942 (2.06%)
UMB Rs.1099 (0.83%)
UMHL Rs.125 (6.84%)
UPCL Rs.95 (3.26%)
UPPER Rs.278 (9.88%)
VLBS Rs.561 (-2.43%)
WMBF Rs.90 (3.45%)
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
मानव स्वास्थ्यका लागि रगतलाई जति महत्वका साथ हेरिएको छ, सो अनुसार नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा रगतको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको देखिन्छ । रगत अभावकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रगत अभावमा नै मुत्यु हुने बिरामीको संख्या धेरै छ । रक्तदानसम्बन्धी जानकारी नहुँदा कतिपयले चाहेर पनि रक्तदान गर्न पाएका छैन्न । कतिपयले भने कयौं पटक रक्तदान गरिसकेका छन् । अर्जुन मैनालीले हालसम्म १ सय ६३ पटक रक्तदान गरिसकेका छन् । काभे्र पलान्चोकमा जन्मिएका मैनाली रक्तदानको क्षेत्रमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै रक्तदानको महत्व र आवश्यकताबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकामा बसोबास गर्ने मैनाली रक्तदान र अन्य समाजसेवी काम गर्न नेपाल र विश्वभरका विभिन्न देश भम्रण गर्ने गरिहन्छन् । विगत १७ वर्षदेखि अमेरिका बसोबास गर्दै आएका उनले जागिरबाट बचेको समय सदुपयोग गरेर रक्तदानका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौंमा माडबारी परिवारमा जन्मिएकी नीता घिराइया विश्वमै सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने महिलाका रूपमा रहेको दाबी गरिएको छ । बी पोजेटिभ रगत समूहकी नीताले नेपालमा मात्र हैन, विश्वभर नै धेरै रक्तदान गर्ने महिलाको सूचीमा नाम लेखाएकी छन् । २०२२ सालमा जन्मिएकी घिराइयाले १५ वर्षको उमेरदेखि नै रक्तदान गर्दै आइरहेकी छन् । उनले २०३७ सालमा पहिलो पटक रक्तदान गरेकी थिइन् । उनले हालसम्म १ सय ४१ पटक रक्तदान गरिसकेकी छन् । विश्व रक्तदान दिवसका अवसरमा सर्वाधिक रक्तदान गर्ने अर्जुन मैनाली र नीता घिराइयासँग रक्तदानको महत्वबारे कारोबारकर्मी गोपाल संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सार:
माध्यमिक तहमै रक्तदानबारेको पाठ समावेश गर्नुपर्छ
नेपालमा रक्तदानको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा रगतको माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्ने हो भने बर्सेनि सवा २ लाख युनिट रगत उत्पादन हुदै आएको छ, तर देशभर सवा ३ लाख युनिटको माग छ । यसरी हेर्दा अझै पनि नेपालमा मागअनुसार रगतको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा एक दिनमा ४ सय ५० युनिट रगत चाहिने देखिन्छ, तर रक्तदाताबाट दैनिक करिब १ सय ५० युनिट मात्र संकलन हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा अझै पनि ३ सय जनालाई मागअनुसारको रगत नपुग्ने देखिन्छ । अब यो अपुग रगतको माग पूरा गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ ।
माध्यमिक तहको पाठ्यपुस्तकमा रक्तदानका विषयमा जानकारीमूलक पाठ राख्यो भने विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने र वयस्क भएपछि रक्तदान गर्ने सोचको विकास हुने थियो ।
मागअनुसार रगत संकलन हुन सकेको छैन भन्नुभयो । नेपालमा रगत संकलन बढाउनु के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा धेरैभन्दा धेरै रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि रक्तदान गर्ने संंस्थालाई केही सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न विद्यालय, क्याम्पसमा गएर रक्तदान कार्यक्रम राख्नुपर्यो भनेर उत्पे्ररणा गर्नुपर्छ । यो काम रेडक्रस र रक्तसञ्चार केन्द्रको हो । यसैगरी रक्तदान गराउने संस्थालाई सहयोग गर्ने, धेरै पटक रक्तदान गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री तहबाट पुरस्कार र हौसला दिने परिपाटीको विकास गरेर रक्तदान गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहको पाठ्यपुस्तकमा रक्तदानका विषयमा जानकारीमूलक पाठ राख्यो भने विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने र वयस्क भएपछि रक्तदान गर्ने सोचको विकास हुने थियो । भविष्यमा धेरै भन्दा धेरै रक्तदाता बढाउन अहिलेदेखि नै उनीहरूलाई यसको महत्वबारे जानकारी दिन सक्नुपर्छ ।
रक्तदान गर्ने प्रेरणा कहाँ मिलेर १ सय ६३ पटकसम्म रक्तदान गर्नुभयो ?
मेरो कुरा नै गर्ने हो भने सन् १९८५ मा कलेजमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्दा ‘द ब्लड डोनर’ भन्ने पाठमा एक व्यक्तिले धेरै पटक रक्तदान गरेर धेरै मानिसलाई बचाएको कथाबाट म प्रभावित भएको थिएँ । यही पाठको प्रेरणाले मैले रक्तदान गर्न थालें र पछि मैले राम्रो काम गरेको देखेर साथीहरूले पनि रक्तदान गर्न सुरु गरे, तर अहिले पाठ्यक्रममा त्यो पाठ छैन । अहिले नयाँ रक्तदाता बढ्न नसक्नुमा पनि रक्तदान शिक्षाको कमी हो जस्तो लाग्छ । नयाँ पुस्ताका रक्तदाता बढाउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकमा रक्तदानको पाठ राख्नु जरुरी छ । यसै गरी हामी एनआरएनले रक्तसञ्चार प्रविधि हस्तान्तरण भनेर यस कार्यक्रमका लागि करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर रक्तसञ्चार संस्थालाई आधुनिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने योजना चलाइरहेका छौं ।
कहिलेदेखि रक्तदान गर्दै आउनुभएको छ ?
१९८७ अगस्ट २० बाट पहिलो पटक रक्तदान गरेर यो अभियान सुरु गरेको हुँ । यसरी नै पछिल्लो पटक २०१८ मे २३ मा थाइल्यान्डमा गरेको थिएँ । यो मेरो १ सय ६३ औं पटकको रक्तदान हो । मैले पहिलो पटक कलेजमा पढेको पाठले रक्तदान गर्न प्रेरणा मिल्यो भने पछि विशालबजारमा रक्तदान कार्यक्रम भएको देखेर त्यहाँ पहिलो पटक रक्तदान गरे । यसपछि रक्तदाता कार्ड बन्यो र रक्तसञ्चार केन्द्रमा आइजाइ भइरह्यो । त्यसबेला रगतका किसिम, यसको बारेमा जान्ने कोसिस गरे । आफ्नै श्रीमतीका लागि रगत दान गर्न डराउने एक श्रीमान्लाई भेटेपछि मलाई रगत दान गर्ने प्रेरणा अझ मिल्यो । त्यसपछि रक्तदान कार्यक्रम र अभियानमा लागेको थिएँ ।
कहिलेदेखि रक्तदान कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुभयो ?
मैले सुरुमा १६ पटक रक्तदान गरिसकेपछि सन् १९९० डिसेम्बर ५ मा रक्तदान गर्दा कुनै असर हुँदैन भन्ने जनचेतना जगाउन रक्तदान गरेको १ घण्टापछि देशव्यापी रक्तदान अभियान साइकल यात्रा सुरु गरेको थिएँ । सन् २००८ मा नेपालीको सहयोग र सहभागितामा अमेरिकामा संस्थागत रूपमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ८ हजारभन्दा बढीलाई सहभागी गराएका छौं । मैले विश्वका विभिन्न देश गरेर १४ वटामा रक्तदान गरिसकेको छु । यसै कारण अमेरिकाको पे्रन्सिडेन्सियल भोलेन्टरी अवार्ड पाएको छु । अमेरिकामा रक्तदान अभियान सफल भएपछि क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोपियन देश, अफ्रिकालगायतका देशमा रहेका नेपालीलाई रक्तदान गर्न उत्प्रेरणा गरेको छु ।
कुनै संस्थासँग मिलेर रक्तदान अभियान गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
मैले १९८७ मा जब रक्तदान गरें, त्यसपछि १९८८ तिर अब यसरी रक्तदान गर्ने मानिसहरू र संस्थालाई एकढिक्का गरेर राख्ने संस्थाको आवश्यकता पर्छ भनेर नेपालमा नेपाल ब्लड डोनर क्लब भनेर बनायौं । पछि काम गर्न अझ सजिलो होस् भनेर ब्लड डोनर एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर संस्थाको नाम परिवर्तन गर्येउ । अहिले यो संस्था नेपालको ठूलो संस्थाका रूपमा रहेको छ । त्यसपछि मैले अमेरिकामा धेरै नेपालीले रक्तदान गरिरहेको अवस्थामा सन् २००९ मा ‘ब्लग डोनर संघ अमेरिका’ स्थापना गर्येउ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैलाई समेट्ने उद्देश्यले २०१४ मा ‘इन्टरनेसनल ब्लड डोनर्स’ स्थापना गरियो । एनआरएनएमा एकेडेमीअन्तर्गत पाँच–सातवटा संस्था छन् । यसमध्ये रक्तसञ्चार प्रविधि हस्तान्तरण भन्ने एक समिति छ, म त्यसको सदस्य पनि हुँ ।
३१ वर्षको अवधिमा म आफैले पनि १ सय ६३ पटक रक्तदान गरिसकें । यसरी हेर्दा रक्तदानले स्वास्थ्यमा हानि गर्दैन ।
एउटा व्यक्तिले कति समयमा कति रगत दान गर्न सक्छ ?
१८ वर्ष पूरा भएको स्वस्थ पुरुषमा प्रतिकिलो ७६ एमएल रगत हुन्छ । यसरी नै महिलामा प्रतिकिलो ६६ एमएल रगत हुन्छ, जब कि हामीलाई दैनिक रूपमा काम गर्न ५० एमएल रगत चाहिन्छ । केटा मान्छेमा २६ एमएल रगत अतिरिक्त देखिन्छ भने महिलामा १६ एमएल अतिरिक्त हुने गरेको छ । यसरी बाँकी रहेको मध्ये पनि हामीले ९ एमएल मात्र रगत दान गर्ने हो । यसरी हेर्दा मानिसको शरीरबाट ९ एमएल रगत दान गर्दा असर पर्दैन । दोस्रो कुरा, रगतको आयु १ सय २० दिन मात्र हुन्छ । हामीले रक्तदान गरे पनि नगरे पनि रगतको आयु १ सय २० दिनसम्म हुन्छ । अर्को कुरा, ३१ वर्षको अवधिमा म आफैले पनि १ सय ६३ पटक रक्तदान गरिसकें । यसरी हेर्दा रक्तदानले स्वास्थ्यमा हानि गर्दैन ।
नेपालमा रगत आवश्यक पर्ने रोगीको अवस्था र आपूर्ति कस्तो छ ?
दुर्घटना, प्रसूति सेवा, रगत कम भएका बिरामी र क्यान्सर रोगीलाई धेरै रगत आवश्यकता हुने गर्छ । नेपालमा यस्ता रोगीका लागि इमरजेन्सी अवस्थामा रगत पाइँदैन । यस्तो बेला तपाईं हामीजस्ता स्वस्थ व्यक्तिले गरेको रगत दानले उनीको जीवन बचाउन सकिन्छ । यसले गर्दा बिरामीको जीवन बचाउन हाम्रो शरीरमा भएको खेर जाने रगत दिँदा केही फरक पर्दैन । रगत दिँदा दुईवटा कुरालाई ध्यान दिने गरिन्छ । एउटा भनेको रगत दान गर्ने स्वस्थता हो । एक स्वस्थ व्यक्तिलाई अस्वस्थ बनाएर रक्तदान गर्ने कुरा आउँदैन । रक्तदान गर्ने नियम देशअनुसार फरक–फरक छ । अमेरिकामा १ वर्षमा ६ पटक रक्तदान गर्न सकिन्छ । यसै गरी नेपालमा हरेक तीन–तीन महिनामा रगत दिन मिल्छ ।
म रगतको मूल्य बढी छ र धेरैमा बेचिन्छ भन्ने कुरामा सहमत छैन । साधारण बिरामीले किन्ने सक्ने नै मूल्य राखिएको हुन्छ ।
निःशुल्क रगतको पनि धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने गुनासो आएको छ नि ? वास्तवमा पैसा नलिँदा हुँदैन ?
रक्तदान गर्नेले निःशुल्क दिने गरेका छन् । यसरी हेर्दा रगत लिनेले पनि निःशुल्क नै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्लान्, तर हामीले दिएको निःशुल्क रगतलाई स्टोरेज, परीक्षण, ब्लडब्याग खरिद गर्नुपर्छ, यी सबै कुराले संकलित रगतको लागत बढ्ने देखिन्छ । यो मूल्य रगत संकलन गर्ने संस्थाले ओभरहेड कस्ट जोडेर राखेको मूल्य हो । यसरी हेर्दा रगतको मूल्य धेरै लिएकोे पाइन्छ । अब यसमा विवादको कुरा ल्याउनु हुदैन । बिरामीलाई उपचार गर्न न्यूनतम रूपमा १ लाखभन्दा धेरै खर्च हुन्छ । सो तुलनामा रगतको मूल्य धेरै राखिएको हुदैन । म रगतको मूल्य बढी छ र धेरैमा बेचिन्छ भन्ने कुरामा सहमत छैन । साधारण बिरामीले किन्ने सक्ने नै मूल्य राखिएको हुन्छ ।
सम्मानका लागि समाजसेवा गरिँदैन, तर तपाईंको योगदानलाई समाजले कसरी हेरेको जस्तो लाग्छ ?
कसैले कुनै पनि सामाजिक काम पैसा, सम्मानका लागि गरेको हुदैन । समाजसेवा आत्मादेखि नै सक्नेले नसक्नेलाई गर्ने हो । रगत पनि त्यस्तै हो । कसैले आफ्नो शरीरबाट अलिकति रगत दिनु दाताको महानता हो । यस्ता दातालाई कसैले सम्मान गर्छ भने आउने पुस्तालाई पनि रक्तदानप्रति प्रेरणा मिल्छ । सम्मान पाउने व्यक्तिले सम्मान पाइहाल्छ तर उसले पाएको सम्मानले अरूलाई प्रेरणा मिल्नुचाहिँ ठूलो कुरा हो । यसैले गर्दा सम्मानको आस गर्नु हुँदैन र गरेको सम्मानलाई अपमान पनि गर्नु हुँदैन ।
कृषि अनुदान वितरण एकद्वार र भौचर प्रणालीबाट गर्दैछौं
लुम्बिनीमा पर्यटक भुलाउने गतिविधि जरुरी
गैरकानुनी रुपमा प्रयोग भइरहेका विदेशी पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोगमा रोक
डेढ करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन
एनसेल र पुल्चोक क्याम्पसबीच सहमति
गाउँपालिका र बैंक एउटै घरमा, कारोबार भने सदरमुकाममा
सांग्रिला बैंकको नयाँ मोबाइल बैंकिङ सुविधा
चिनियाँ प्रतिक्रिया व्यापारभन्दा परसम्म
हुवावेमाथि गुगलको ‘किल स्विच’ प्रहार
तीन युवा मिलेर खोले ‘लन्ड्रीपार्क’ उद्योग